ဆိုဖီ Shrug PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ - အဆိုပါ Tailoress
နေအိမ် / အမြိုးသမီးမြား / ထိပ် / ဆိုဖီ Shrug PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
ဂျာစီပိတ်ထည်များအတွက်သင့်လျော်သော, the close fitting Sophie Shrug featuresasweeping front panel that can be used asawrap or left open forasmart casual look.
categories: ထိပ်, အမြိုးသမီးမြား
ထိုကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး Sophie Shrug Tutorial ဤနေရာတွင်သို့မဟုတ်ဤစာမျက်နှာ၌ဖွင့်လှစ်ဖို့အောက်က tab ကိုနှိပ်ပါ.
အားလုံးပုံစံများကိုသင်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်စာမျက်နှာများပေါ်တွင် print ထုတ်ခွင့်ပြုပါရန်အဖြစ်အပြည့်အဝစကေးစာရွက်စာတမ်းများလာအဖြစ် A4 နဲ့အမေရိကန်ပေးစာစာရွက်စာတမ်းများသုံးနိုင်.
Copyshop အရွယ်အစား: 90cm x 76cm
ဤစီမံကိန်းတစ်လျှောက်လုံး zig-zag ချုပ်သို့မဟုတ်အခြားလမ်းပိုင်းချုပ်သုံးပါ. ဒါ့အပြင်တစ်ဦးကဘောဂျာစီစက်အပ်သုံးစွဲဖို့သေချာ.
£ 6.33 စျေးဝယ်ခြင်းထဲသို့ထည့်သည်
£ 3.45 စျေးဝယ်ခြင်းထဲသို့ထည့်သည်
£ 5.06 စျေးဝယ်ခြင်းထဲသို့ထည့်သည်